Shan Cashar oo uu Mareykanka illaawi doonin oo uu ka bartay la dagaalanka ”Islaamiyiinta” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Shan Cashar oo uu Mareykanka illaawi doonin oo uu ka bartay la...
Shan Cashar oo uu Mareykanka illaawi doonin oo uu ka bartay la dagaalanka ”Islaamiyiinta”
(Hadalsame) 10 Sebt 2021 – Waa maxay casharrada, haddii ay jiraan, laga bartay 20 -kii sano ee la dagaalanka argagixisada adduunka oo dhan? Maxaa shaqeeyay, maxaan se shaqayn? Maantana, maadaama Afgaanistaan ​​ay mar kale xukumayaaan dhaqdhaqaaqii gabbaadka siiyey al-Qaacida, caqli iyo xikmadi ma inoo korodhay kaddib subaxdii 11-kii Sebtember 2001?
Madaxweyne George W Bush, sagaal maalmood ka dib weeraradii 9/11 ayaa ku dhawaaqay in laba loo qaybsamayo “hadda ayaad haysataa go’aan in aad qaadato. annaga aayaad nala jirtaa ama waxaad la jirtaa argagixisada”.
Waxaana loogu dhawaaqay “Dagaalkii ka dhanka ahaa Argagixisada”. Waxay tan iyo markaas horseedday duullaankii Afgaanistaan, ka dibna Ciraaq, soo ifbixii ISIS iyo kororka maleeshiyaadka ay Iiraan taageerto ee ku baahsan Bariga Dhexe, iyo dhimashada kumanaan shaqaale iyo haween ah iyo dad kale oo badan oo rayid ah.
Argaggixisannimadu wali ma dhammaan – dal kasta oo weyn oo Yurub ah waxaa ku dhacay weeraro sannadihii la soo dhaafay – laakiin waxaa jiray guulo. Illaa iyo hadda, waligeed ma dhicin weerar ku soo dhowaaday baaxadda kii 9/11. Waxaa la burburiyay saldhigyadii Al-Qaacida ee Afgaanistaan, hoggaamiyeyaashoodii ayaa lagu ugaadhsaday Pakistan. Khilaafadii Isis ee iskeed isu magacawday ee Suuriya iyo Ciraaq waa la kala diray.
Liiska hoos ku qoran shaki kuma jiro mana aha mid la isku raaci karo oo dhammaystiran. Waxay ku salaysan tahay aragtida gaarka ee weriyiha dhanka ammaanka ee BBC-da Frank Gardner ee ku saabsan mawduucan ka hadlaya Bariga Dhexe, Afgaanistaan, Washington iyo Guantanamo Bay.
1. Midayntii dhinacyada sirdoonka
Tuhummo way jireen, se cidina kuma dhiirran in ay la shir timaaddo. Bilihii ka horreeyey 9/11, labada hay’adood ee sirdoonka Maraykanka, FBI iyo CIA, labaduba waxay ka war hayeen in nooc ka mid ah qarax ama dhagar kale ay ku soo fool leedahay.
Laakiin arrintaas waxaa saameeyey xafiiltankii u dhexeeyay ururinta sirdoonka gudaha iyo dibaddaba. Tan iyo markaas, Warbixintii Komishanka 9/11 waxay si dhammaystiran loogu sheegay khaladaadkii la sameeyey oo horumar weyn laga sameeyey hadda.
Booqashadaydii Xarunta Qaranka ee Ka -hortagga Argagixisada (NCTC) ee Virginia sannadkii 2006, waxaa la i tusay sida 17 hay’adood oo Mareykan ah ay hadda isugu geeyaan sirdoonkooda maalin kasta.
Britain waxay sameysay xarun isku -dhaf ah: Xarunta Falanqaynta Argaggixisada ee Wadajirka ah (JTAC) halkaas oo daraasiin khabiirro ah oo ka socda MI5, MI6, Difaaca, Gaadiidka, Caafimaadka iyo aagag kale dhammaantood ay wada fadhiistaan hal dhisme oo ku yaal Bannaanka London, iyagoo baadhaya kuna samaynaya qiimeyn joogto ah hanjabaadaha argagixiso ee ku socota muwaadiniinta UK gudaha iyo dibaddaba.
Qaraxii magaalada Manchester ee 2017, dhibanayaashiisii
Laakiin iyadoo sidaasi ay jirta haddana nidaamku ma ahan mid bilaa guul darro ah. Laba sano kadib markii la asaasay JTAC al-Qaacida waxay fulisay qaraxyadii London 7/7, iyagoo adeegsanaya muwaadiniin British ah si ay u dilaan in ka badan 50 qof. Shirqool aad u weyn oo lagu doonayay in lagu qarxiyo diyaarado badan ayaa la baajiyay sanadka xigay, iyadoo la kaashanayo Pakistan laakiin Britain ayaa weli la kulantay weeraro badan sanadkii 2017 oo uu ku jiray qaraxii Manchester.
Sidaas darteed xitaa xog-uruurin iyo wadaag wanaagsan ayaa ku guul-darraysan kara ka-hortagga weerarrada haddii go’aanno khaldan laga qaato mudnaan-siinta hawlaha.
Weerarkii Bataclan ee ka dhacay Paris sannadkii 2015kii, kaasoo ay ku dhinteen 130 qof oo dacwaddu hadda socoto, ayaa qayb ahaan ka dhashay guul -darrada masuuliyiinta Yurub oo ah inay wadaagaan sirdoon.
2. Qeexidda ujeedka iyada oo aan laga habaabayn
Dhammaan sababaha badan ee ay Afgaanistaan ugu noqotay taliskii Taalibaan, hal arrin ayaa ka dhex muuqda: duulaankii uu Maraykanku hoggaaminayay ee Ciraaq 2003. Go’aankan guuldarraystay wuxuu noqday mid aad loogu mashquuliyo waxa ka socda Afgaanistaan.
Qaar badan oo ka mid ah Ciidamada Gaarka ah ee Mareykanka iyo Ingiriiska, oo si guul leh u ugaadhsanayey hawl-wadeennada al-Qaacida ee Afgaanistaan ayaa laga saaray oo loo diray Ciraaq.
Tani waxay u saamaxday Daalibaan iyo kuwa kaleba inay dib isu soo abaabulaan oo soo noqdaan iyagoo xoog leh. Bishii Nofembar 2003, markii aan booqday saldhigga ciidamada lugta ee Mareykanka ee ku yaal gobolka Paktika ee Afgaanistaan, Mareykanku waxay durba ku tilmaamayeen howlahooda halkaas ” hawlgal la illaaway”.
Way sahlan tahay in la iloobo in hawlgalkii asalka ahaa ee Afgaanistaan uu ahaa mid cad oo si fiican loo fuliyay. Ka dib markii taliyayaasha Daalibaan ay diideen inay ku wareejiyaan dambiilayaasha, Mareykanka wuxuu la kaashaday Isbahaysiga si ay ugu guuleystaan inay ka saaraan Taliban iyo al-Qaacida labadaba.
Laakiin sannadihii xigay hawlgalkii ayaa markaa la khafiifiyay, oo dhinacyo badan loo kala leexday.
Nolosha ayaa si aad ah u soo hagaagtay muddadaas inta badan dadka reer Afqaanistaan laakiin balaayiin doollar oo lagu bixiyay “dhisidda qaran” ayaa lagu lunsaday musuqmaasuq.
3. Xulashada isbahaysigaaga si taxaddar leh
Wada -shaqaynta Britain ee xulufadeeda ugu dhow, Mareykanka, duulaankii 2003 ee Ciraaq waxay horseeday in UK ay ahayd saaxiibka aan talooyinka badan ku lahayn go’aamada muhiimka ah.
Codsiyada deg -degga ah ee ah inaan la kala qaadin ciidamada Ciraaq ama laga mamnuuco dhammaan xubnaha xisbiga Baath doorka dowladda waa la iska indho tiray. Natiijadu waxay noqotay isbahaysi masiibo ah oo u dhexeeya askarta Ciraaq iyo kuwa sirdoonka ee bilaa camalka ah oo leh jihaadiyiinta xagjirka ah. Tani waxay noqotay curashadii Isis.
Argagax -wadareedkii laga qaaday 9/11 wuxuu la macno ahaa in sirdoonka Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku dambeeyeen inay la shaqeeyaan maamulada qaarkood diiwaannada xuquuqda aadanaha ee argagaxa leh.
Tusaale ahaan, ka dib markii taliskii foosha xumaa ee Kornayl Qaddaafi ee Liibiya la afgambiyay sannadkii 2011 suxufiyiinta ayaa helay warqad ka timid sarkaal sare oo ka tirsan MI6 oo u diray dhiggiisa Liibiya kaas oo looga hadlayay dhiibista mucaarad Islaami ah si uu ula kulmo xarig iyo si xun ula dhaqan.
Maanta, jihaad -doonka rabshadaha wata ayaa si aad ah ugu soo noqnoqonaya qeybaha Afrika ee aan sida wanaagsan loo maamulin, taas oo dhibaato ku ah cidda dhabta ah ee ay tahay in reer Galbeedku la shuraakoobaan.
4. Ixitirimaadda xuquuqda aadanaha iyo dhaqanka wanaagsan
Marar badan dadka Bariga Dhexe ayaa ii sheegay: “Waxaa laga yaabaa inaanan jeclayn siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka laakiin mar walba waan ixtiraameynay sharcigeeda marka laga reebo Guantanamo Bay.”
Soo qabqabashada tuhmanayaasha “goobta dagaalka” – oo ay ku jiraan dhowr xaaladood oo rayid aan waxba galabsan oo lagu iibiyay lacag – ka dibna la qafaashay, tas oo burbur aan la soo koobi karin gaadhsiisay Ameerika iyo sumcadda reer Galbeedka.
Xidhitaanka iyada oo aan maxkamad la soo taagin waxay ahayd wax ka dhaca waddammada kalitalisku haysteen. Carabtu kama ay filaynin Maraykanka.
Dhanka kalena waxaa laga deyriyey ciqaabhihii kala duwanaa ee CIA, sida ku harqintii biyaha. Inkasta oo maamulkii Obama joojiyey, haddana waxay ahayd fal aad looga walaacay.
5. Markasta waa inaad lahaataa qorshe bixitaan
Howlgalladii reer galbeedka ee ka horreeyay 9/11 waxay ahaayeen kuwo deg deg ah oo fudud, dhammaad la ogyahayna leh sida, Sierre Leone, Kosovo, xitaa ololihii duufaantii Desert ee 1991 – dhammaantood waxay lahaayeen dhammaad kooban.
Laakiin duulaankii uu Maraykanku hoggaaminayay ee Afgaanistaan iyo ka dibna Ciraaq ayaa ka dhashay waxa loogu yeero “dagaalladii weligood jiray”. Ma jiro qof 2001 ama 2003 saadaaliyay inay wali halkaas joogi doonaan labaatan sano kadib. Si fudud u dhig, Galbeedku ma fahmin waxa ay galayaan mana jirin qorshe bixitaan dhab ah.
Shaki kuma jiro in haddii reer Galbeedku aysan barakicin Taliban iyo Al-Qaacida ee Afgaanistaan 2001 markaas ay dhici lahayd in weerarro intaa ka badan ay halkaas ka dhalan lahaayeen. Hawlgalka la-dagaallanka argagixisada ee dalkaas ma ahayn mid fashilmay laakiin kii qaran-dhiska marna lama dhammaystirin.
Maantana, sawirka hal -adayga ah ee dadka badankiisu ka qaadi doonaan waa kan dadkii reer Afgaanistaan oo quus ah ay ka barbar socdaalaya diyaaradda USAF C17 , iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan waddanka ay reer Galbeedku hadda iska dhaafeen.
Previous articleWaan waan laga dhex bilaabay khilaafka Madaxtooyada & wararkii ugu dambeeyey
Next articleSirdoonka reer Galbeedka oo ka walaacsan hub halis ah oo ay ”gacanta ku dhigi karaan” Daalibaanku (Dal Muslim ah oo far lagu godayo)